Kharajka & Wakhtiga ku baxa Nabadsugidda qoyska reer Trump – Kasmo Newspaper
Kharajka & Wakhtiga ku baxa Nabadsugidda qoyska reer Trump
Updated - February 18, 2017 6:11 pm GMT
Hab-nololeedka khiyaaliga ah ee qoyska reer Trump wuxuu Hay’adaha Sirdoonka iyo Nabadgalyada Maraykanka uga dhiganyahay masiibo xagga “logistics”ka ah, waxaana ka sii daran qiimaha uu ugu fadhiyo canshuurta dadweynaha.
Wargayska Washington Post ayaa maqaal dheer oo tifaftiran ku eegaya culayska ay leedahay ilaalinta nabadgalyada qoyska Madaxweyne Donald Trump ee tirada badan misana firfircoon. Kuwaas oo ka kooban Marwada 1aad, 4ta uu dhalay oo ay ku jiraan 2da wiil ee socodka badan, hawlahooda an dhammaan ee ganacsi darteed, Eric iyo Donald Junior.
Waa waajib baaxad leh marka laga fiiriyo oo qur ah guryihiisa tirada badan iyo badbaadintooda uu ku baxo kharajka faraha badan.
Wargaysku ma hayo xog sugan oo ay leeyihiin Hay’adaha ku shaqada leh laakiin qiyaasuhu waa kuwo aad uga sarreeya kuwii Madaxweynihii ka horreeyay, waxayna caga cagaynayaan boqollaal malyuun oo Dollar, muddada xilkiisa oo 4ta sano ah.
Tusaale ahaan, toddobaadkan oo qur ah, Madaxweynuhu wuxuu jimcihii shalay ugu duulay “Airforce One” halka uu ku nasto oo ah “Mar-a-lago” ee Palm Beach, Florida ku taalla, waana markii 3aad oo xiriir ah. Sabtida maanta ahna, wiilashiisa Eric iyo Donald Jr iyo colweynaha la socda oo lagu daray Dibolomaasiyiinta maxalliga, waxay ku suganyihiin geesta kale ee Dunida, xafladda UAE ee daahfurka garoonka cayaarta “Golf” ee qoyska “Beverly Hills”ka Dubai.
Dhanka kale Boliiska New York ayaa sii wada ilaalinta nabadgalyada dhismaha Trump Tower, halkaas oo ay ku nooshahay Marwada 1ad Melania iyo wiilkeeda yar, Barron.
Intaa waxaa sii dheer qoyska intiisa kale, laga bilaabo Ivanka Trump iyo seygeeda, Jared Kushner iyo 3dooda ilmood, oo dhowaan u soo wareegay Caasimadda Washington.
Xogta ku cad dokumenti xukuumadeed oo la helay, 3dii “Weekend” ee Madaxweynaha oo ay la socdeen cutubyo ka tirsan ilaalada xeebaha, waxaa ku baxay $ 10 Malyuun oo Dollar. Magaalada New York, ilaalinta dhismaha Trump Tower waxaa maalintii ku socota nus-malyuun Dollar, taas oo noqonaysa, sannadkii $ 183 malyuun oo Dollar.
Safar wiilashiisu ku tageen, bilowgii Jenaayo, dalka Uruguai, dano ganacsi oo qoyska u gaar ah darteed, Wargayska Washington Post ayaa qoray in ay ku baxday $ 100,000 oo hanti ummaddeed ah.
Culays baaxad leh ayay ku tahay Sirdoonka, ilaalinta aag sidaas u ballaaran oo ku fadhiya Washington, Florida iyo New York, iyada oo xisaabta an lagu darin badbaadinta qalabka kale ee Trump ka yaalla dibadda dalka. Si kastaba ha ahaatee Sirdoonku waxay xaqiijinayaan gacan ku-haynta xaaladaha, afhayeen u hadlayna wuxuu caddeeyay in Hay’aduhu awood u leeyihiin in ay ka jawaabaan dalabaadka Madaxtooyada.
Maamul kasta wuxuu la yimaadaa culaysyo u gaar ah oo Hay’adaha Nabadgalyadu sidiisa ula tacaamulaan, Sirdoonkuna kalsooni buuxda ayuu ku qabaa qorshayaashiisa.
Akhri sheeko la xiriirta:
Lacag sharci-darro ah oo ku baxay safar wiilka Madaxweyne Trump